သင့်မိသားစုကို ကလေး လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုခင်း ကင်းဝေးတဲ့ လုံခြုံရာရိပ်မြုံတစ်ခု ဖြစ်စေပါ
နိုးလော့! | အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ချက် ဂရိ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျာမန် စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား ဆွီဒင် တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာရဗီ အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို
‘ပကတိကြင်နာစုံမက်ခြင်းမရှိ။’ “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ” ဟုခေါ်ဆိုသော ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ရှိ လူများစွာအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက အဆိုပါဝမ်းနည်းစရာစကားများဖြင့် ဖော်ပြသည်။ (၂ တိမောသေ ၃:၁၊ ၃၊ ၄၊ သမ္မာ) မိသားစုအတွင်း ကလေးမတော်မတရားပြုမှု ပြန့်ပွားနေခြင်းက အဆိုပါပရောဖက်ပြုချက် မှန်ကန်နေကြောင်း အထင်အရှားဖော်ပြ၏။ အမှန်ဆိုရလျှင် “ပကတိကြင်နာစုံမက်ခြင်းမရှိခြင်း” ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ပြန်ဆိုထားသော မူရင်းဂရိစကားလုံး အက်စ်ထောဂိုစ်က မိသားစုဝင်များအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် သားသမီးများနှင့်မိဘများအကြား ထားရှိသင့်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမရှိကြောင်း ဖော်ပြနေ၏။ * များသောအားဖြင့် ကလေးမတော်မတရားပြုမှုသည် မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်။
လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှု ကျူးလွန်သူအများစုမှာ ဖခင်တာဝန်ယူရသည့် အမျိုးသားများဖြစ်ကြောင်း သုတေသီအချို့ကဆိုကြသည်။ အခြားဗလက္ကာရပြုသူများမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းများထဲမှ အမျိုးသားများဖြစ်လေ့ရှိ၏။ မတရားပြုကျင့်ခံရသူအများစုမှာ မိန်းကလေးများဖြစ်ကြသော်လည်း ယောက်ျားလေးများစွာသည်လည်း အလားတူပြုကျင့်ခံရကြ၏။ မတရားပြုကျင့်သူအမျိုးသမီးများလည်း သင်ထင်သလောက် မရှားချေ။ လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ပြောဆိုရေးသားကြသည့် မတော်မတရားပြုမှုပုံစံအများစုမှာ သွေးနီးသူချင်းစပ်ယှက်မှု ဖြစ်ပေမည်။ ယင်းမှာ အသက်ပိုကြီးသည့် သို့မဟုတ် အားပိုရှိသည့်ကလေးတစ်ဦးက မိမိထက်အသက်ပိုငယ်သူ သို့မဟုတ် အားနွဲ့သူ ညီ၊ ညီမကို လိင်အကျင့်ဖောက်ပြားရန် အနိုင်ကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘတစ်ဦးအနေနှင့် သင်သည် ယင်းသို့သောအကျင့်များကို စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာများအဖြစ် အမှန်ပင်သိရှိထား၏။
သင့်မိသားစုအတွင်း အဆိုပါပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရန် မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သနည်း။ မိသားစုဝင်တိုင်း မတော်မတရားပြုသည့်အမူအကျင့်မှ ကာကွယ်ပေးသောမူအချို့ကို သင်ယူသိရှိပြီး လေးမြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောလမ်းညွှန်မှုမျိုးကို ရှာတွေ့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနေရာမှာ ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖြစ်ပေသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံရာရိပ်မြုံဖြစ်စေရန် မိသားစုတိုင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကျမ်းစာစံနှုန်းကို လိုက်နာရန်လို၏။ သမ္မာကျမ်းစာသည် လိင်အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုရာတွင် မဝံ့မရဲမဖြစ်ချေ။ ယင်းအကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနှင့် သိက္ခာရှိရှိ ဖော်ပြထားသည်။ လိင်မှုကိစ္စသည် ဇနီးမောင်နှံတို့အတွက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဖြစ်စေရန် ဘုရားသခင်ပုံစံပြုထားကြောင်း ယင်းကဖော်ပြ၏။ (သု. ၅:၁၅-၂၀) သို့သော် အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်သူနှင့်ပြုကျင့်သော လိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုမူ ယင်းက ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။ ဥပမာ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် သွေးနီးသူချင်းစပ်ယှက်မှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်ထားသည်။ ဝတ်ပြုရာ ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၈ တွင် သွေးနီးသူချင်းစပ်ယှက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကို တားမြစ်ထား၏။ အထူးသဖြင့် ဤစကားများကို သတိပြုကြည့်ပါ– ‘သင်တို့တွင် အဘယ်သူမျှ ကိုယ့်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ရင်းနှင့် လိင်မှုကိစ္စပြုရန် မချဉ်းရ။ ငါသည် ယေဟောဝါဖြစ်၏။’—⁠ဝတ်ပြုရာ ၁၈: ၆၊ သမ္မာ။
ယေဟောဝါ သေဒဏ်ပေးနိုင်သော ‘ရွံရှာဖွယ်အမှုများ’ တွင် သွေးနီးသူချင်းစပ်ယှက်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထား၏။ (ဝတ်ပြုရာ ၁၈:၂၆၊ ၂၉) ဤကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖန်ဆင်းရှင်၌ အလွန်မြင့်မားသောစံနှုန်းများ ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အာဏာပိုင်များစွာကလည်း ထပ်တူရှုမြင်ကာ မိသားစုအတွင်း ကလေးများအား လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှုကို တားမြစ်ထားကြသည်။ လူကြီးတစ်ဦးသည် ကလေးတစ်ဦးနှင့် လိင်မှုကိစ္စပြုလျှင် ဥပဒေအရ ယင်းသည် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းဖြစ်၏။ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်ခြင်းမဟုတ်လျှင်ပင် “မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း” ဟူသော ပြင်းထန်သည့်စကားလုံးကို အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရသနည်း။
လူကြီးများကဲ့သို့ ကျိုးကြောင်းမဆင်ခြင်နိုင်သည့် ကလေးသူငယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုခဲ့ရာများကို အာဏာပိုင်များစွာက အသိအမှတ်ပြုလာကြပြီဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ နယပုံပြင်ကျမ်း ၂၂:၁၅ က “မိုက်သောသဘောသည် သူငယ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ ထုပ်ထားလျက်ရှိ၏” ဟုဆိုသည်။ တမန်တော်ပေါလုလည်း ဤသို့ရေးသားရန် မှုတ်သွင်းခံရသည်– “ငါသည် သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါ၊ သူငယ်လိုစကားပြော၏။ သူငယ်လို စိတ်ထင်၏။ သူငယ်လို ကြံစည်၏။ အသက်ကြီးသောအခါမူကား၊ သူငယ်၏အရာများကို ငါပယ်ရှား၏။”—⁠၁ ကောရိန္သု ၁၃:၁၁။
ကလေးတစ်ဦးသည် လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များကို အပြည့်အဝ နားမလည်နိုင်သကဲ့သို့ နှစ်များတစ်လျှောက်ခံရမည့် အကျိုးဆက်များကိုလည်း ကြိုတင်စဉ်းစားမိနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် လိင်မှုကိစ္စတွင်ပါဝင်ရန် ကလေးများက သဘောတူခွင့်ပြုခြင်းသည် တရားမဝင်ကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံထားကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူကြီးတစ်ဦး (သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်ပိုကြီးသော လူငယ်တစ်ဦး) သည် ကလေးတစ်ဦးနှင့် လိင်မှုကိစ္စပြုခဲ့လျှင် အသက်အရွယ်ပိုကြီးသူသည် အဆိုပါလုပ်ရပ်ကို ကလေးက မကန့်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် သဘောတူကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် ဆင်ခြေပေး၍မရချေ။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်၏။ ယင်းသည် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ မုဒိမ်းမှုအတွက် တာဝန်ယူရမည့်သူမှာ အလိုမတူသူမဟုတ်ဘဲ မုဒိမ်းကျင့်သူသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်တွင် ယင်းသို့သောရာဇဝတ်မှုအများစုကို အာဏာပိုင်များက အရေးမယူကြခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်။ ဥပမာ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ တရားစွဲဆိုခံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရ၏။ အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း အလားတူမှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များသည် ခရစ်ယာန်မိသားစုကို ကာကွယ်မှု အနည်းအကျဉ်းသာပေးနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကျမ်းစာမူများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းက အကာအကွယ်များစွာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါမူများကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်း စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များ အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်လေသမျှ၊ လူသားအများစု မတွေ့ မြင်သောလုပ်ရပ်များကိုပင် ကိုယ်တော် တွေ့မြင်တော်မူ၏။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်– “ငါတို့ကို စစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှေ့၌ မထင်ရှားသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အကွယ်အကာမရှိဘဲ မျက်မှောက်တော်၌ လှန်ထားလျက်ရှိကြ၏။”—⁠ဟေဗြဲ ၄:၁၃။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မိန့်မှာချက်များကို ချိုးဖောက်ပြီး အခြားသူများကို ထိခိုက်စေမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကိုယ်တော်စာရင်းရှင်းတော်မူမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ မိသားစုဘဝနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိုယ်တော်၏ အကျိုးပြုမိန့်မှာချက်များကို စွဲကိုင်ထားသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။ ယင်းကောင်းချီးတချို့ကား အဘယ်နည်း။
“မေတ္တာသည် စုံလင်ခြင်း၏ စည်းလုံးသောအနှောင်အဖွဲ့” ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဆို၏။ (ကောလောသဲ ၃:၁၄၊ ကဘ) သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မေတ္တာသည် ခံစားချက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ချေ။ မေတ္တာကို ယင်းကလှုံ့ဆော်ပေးသည့် အပြုအမူနှင့် ယင်းကတားမြစ်သည့်လုပ်ရပ်များဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၃:၄-၈) မိသားစုအတွင်း မေတ္တာပြခြင်းဟူသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သိက္ခာရှိရှိ၊ လေးလေးစားစား၊ ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလို၏။ ယင်းက မိသားစုဝင်အချင်းချင်း ဘုရားသခင့်ရှုမြင်ပုံအတိုင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦးရှုမြင်၍ နေထိုင်သွားခြင်းကိုဆိုလို၏။ ဘုရားသခင်သည် မိသားစုဝင်တစ်ဦးစီအား အသရေရှိ၍ အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခုစီ ပေးအပ်ထားတော်မူ၏။
အိမ်ထောင်ဦးစီးအနေနှင့် ဖခင်ဖြစ်သူသည် မေတ္တာပြရာတွင် ဦးဆောင်သွားသင့်၏။ ခရစ်ယာန်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဇနီးသည် သို့မဟုတ် သားသမီးများအပေါ် အခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုသည့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ခွင့်မရှိကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ထားသည်။ ယင်းအစား ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရာတွင် ခရစ်တော်၏ပုံသက်သေကို သူတုပ၏။ (ဧဖက် ၅:၂၃၊ ၂၅) ထို့ကြောင့် သူသည် ဇနီးသည်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကာ သားသမီးများအပေါ် စိတ်ရှည်၍ ညှာတာ၏။ သူတို့ကို သစ္စာရှိရှိ ကာကွယ်ပေးပြီး သူတို့၏ငြိမ်သက်မှု၊ အပြစ်ကင်းစင်မှု၊ ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့ကို ထိပါးစေမည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို အစွမ်းကုန်တားဆီးသည်။
ထိုနည်းတူ ဇနီးသည်နှင့် မိခင်သည်လည်း အရေးပါပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်၏။ ယေဟောဝါနှင့်ယေရှုတို့ မည်သို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ရန် သမ္မာကျမ်းစာတွင် တိရစ္ဆာန်လောကရှိ တိရစ္ဆာန်မိခင်များ၏ ကာကွယ်ပေးတတ်သော ပင်ကိုအသိစိတ်ကို အသုံးပြုထား၏။ (မဿဲ ၂၃:၃၇) လူသားမိခင်တစ်ဦးသည်လည်း မိမိ၏သားသမီးများကို ထို့အတူ မဆုတ်မနစ် ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။ မိမိအရေးထက် သားသမီးများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကောင်းစားရေးကို ဦးစားပေးရန်အသင့်ရှိခြင်းဖြင့် မိခင်မေတ္တာကိုဖော်ပြသည်။ မိဘများသည် အချင်းချင်းစပ်ကြားတွင်ဖြစ်စေ၊ သားသမီးများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်စေ အာဏာတလွဲသုံးခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့ကို ပြုမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ သားသမီးများကိုလည်း အချင်းချင်းအပေါ် ထိုသို့ပြုလုပ်ခွင့် ပေးမည်မဟုတ်ချေ။
မိသားစုဝင်တစ်ဦးစီအနေနှင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးလေးစားစားနှင့် သိက္ခာရှိရှိ ပြုမူဆက်ဆံသည်နှင့်အမျှ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းပိုရှိလာသည်။ စာရေးဆရာ ဝီလျံပရန်ဒါဂတ်စ်က ဤသို့ဆို၏– “မိဘတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ နေ့စဉ် အမြဲပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံသင့်တယ်။ အဲဒါက လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးတဲ့နည်းဖြစ်ပုံရတယ်။” အမှန်ဆိုရလျှင် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယင်းသို့ တည်တံ့ပြီး မေတ္တာပါသည့် ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ထောက်ခံထားသည်။ (တရားဟောရာ ၆:၆၊ ၇) အဆိုပါလမ်းညွှန်မှုကိုကျင့်သုံးသည့်အခါ နေအိမ်မှာ မိသားစုဝင်များ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးသွမ်းသောလောကတွင် နေထိုင်ရပြီး မတော်မတရားပြုမှုအားလုံးကို မတားဆီးနိုင်ကြပါ။ သို့သော် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေအိမ်က အကူအညီများစွာပေးနိုင်သည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးသည် အိမ်ပြင်ပတွင် အန္တရာယ်နှင့်ကြုံရပါက နှစ်သိမ့်မှုနှင့် စာနာမှုအတွက် အဘယ်အရပ်သို့ပြေးရမည်ကို သူသိထား၏။ ဆင်းရဲခက်ခဲသည့် ဤလောကတွင် ယင်းသို့သောနေအိမ်သည် အမှန်တကယ်ပင် ဘေးကင်းလုံခြုံရာရိပ်မြုံတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ သင့်မိသားစုကို လုံခြုံရာရိပ်မြုံတစ်ခုဖြစ်စေရန် သင်ကြိုးစားအားထုတ်နေမှုအပေါ် ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။
^ အပိုဒ်၊2ဤရှေးဂရိစကားလုံးကို ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ် “အကြင်နာကင်းခြင်း” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာပြန်ကျမ်းတစ်ကျမ်းက ဤအခန်းငယ်ကို “သူတို့သည် . . . မိမိတို့၏မိသားစုများအပေါ် ပကတိချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲ့လိမ့်မည်” ဟူ၍ပြန်ဆို၏။
အင်တာနက်– သင့်သားသမီးများ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရသည်ဆိုလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်များ လိုအပ်ပေသည်။ အင်တာနက်တွင် မရေမတွက် နိုင်သော အပြာရုပ်ပုံစာပေ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပြင် အင်တာနက်စကားဝိုင်းများနှင့် အခြားလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များရှိလေသည်။ ယင်းတို့သည် မတော်မတရားပြုသူများ ကလေးများကိုရှာဖွေပြီး သွေးဆောင်ဖြားယောင်းသည့်နေရာများဖြစ်ကြ၏။ ကွန်ပျူတာကို မိဘများ အလွယ်တကူ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးနိုင်သည့် မြင်သာသောနေရာတွင် ထားရှိခြင်းက ပညာရှိရာရောက်၏။ ကလေးများသည် မိဘများ၏ကြီးကြပ်မှုမပါဘဲ အင်တာနက်ဖြင့် မိတ်ဖွဲ့မိသူတစ်ဦးဦးကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ မပေးသင့်သကဲ့သို့ သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်လည်း မစီစဉ်သင့်ချေ။—⁠ဆာလံ ၂၆:၄။
အရက်ယမကာများ– ကလေးအား မတော်မတရားပြုမှုများစွာ တွင် အရက်ယမကာသောက်သုံးခြင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေ၏။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်စားထားသော လူကြီးများသည် မိမိတို့၏ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းသွားကြောင်း အတွေ့အကြုံက ဖော်ပြသည်။ လူကြီးတချို့သည် မိမိတို့ချုပ်တည်းရမည့်အလိုဆန္ဒများကို အလျှော့ပေးလိုက်ကြလေသည်။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ဤအန္တရာယ်သည် မူးယစ်ခြင်းနှင့် သောက်ကြူးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ ဟူသော ကျမ်းစာအကြံပေးချက်ကို လိုက်နာရန် နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။—⁠သု. ၂၀:၁; ၂၃:၂၀၊၃၁-၃၃; ၁ ပေတရု ၄:၃။
သီးသန့်နေထိုင်ခြင်း– အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဤသို့ ပြန်အမှတ်ရနေသည်– “ကျွန်မအမေဆုံးပြီးတဲ့နောက် တစ်အိမ်လုံးမှာ အဖေတစ်ယောက်တည်းပဲ ခန်းဆီးတပ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်နဲ့ တံခါးရှိတဲ့ အိပ်ခန်းနဲ့နေတယ်။ ကျွန်မတို့ကျတော့ ရေချိုးတာတောင်မှ သီးသီးသန့်သန့်မချိုးရဘူး။” ဤဖခင်သည် ၎င်း၏သမီးအားလုံးကို ဗလက္ကာရပြုလိုက်လေသည်။ မိသားစုဝင်တိုင်းသည် သီးသန့်နေထိုင်ခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကို သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပေသည်။ မိဘများသည် အချို့သောအချိန်အခါများတွင် မိမိတို့သားသမီးများနှင့် သီးသန့် နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်သကဲ့သို့ သားသမီးများကိုလည်း ၎င်းတို့ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သီးသန့်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုပေသည်။ ပညာရှိသောမိဘများသည် မိမိတို့ကို ပြုမူဆက်ဆံစေလိုသည့်အတိုင်း အခြားသူများကို ပြုမူဆက်ဆံကြ၏။—⁠မဿဲ ၇:၁၂။
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ မိဘတိုင်း စိုးရိမ်နေရသော အန္တရာယ်တစ်ခု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သင့်သားသမီးများအား ကာကွယ်ပေးနိုင်ပုံ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သင့်မိသားစုကို လုံခြုံရာရိပ်မြုံတစ်ခုဖြစ်စေပါ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇
နိုးလော့! အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇